मुख्य समाचार « News of Nepal
भारतमा १२० किमी प्रति घण्टाको आँधी आउँदा ८१ जनाको मृत्यु, ज्यान जानेको क्रम जारी
भारतको राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा बुधबार आएको आँधीले निक्कै नोक्सानी पुर्याएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा राजस्थानमा ३६ जना र उत्तर प्रदेशमा ४५ जनाको मृत्यु भएको छ । १४० भन्दा
लामो दुरीमा चल्ने यातायात ठप्प
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ । सरकारले एकतर्फी रुपमा निर्देशिका ल्याएर आफूहरुको व्यवसाय नै संकटमा पार्न खोजेको गुनासो गरिरहेका यातायात व्यवसायीले बिहीबार मध्यान्हबाट लामो दूरीका लागि छुट्ने बस बन्द गराएका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन प्रकरणः अदालतमा अभियुक्तको बयान सुरु
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । साढे ३३ केजी सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तको बिहीबारबाट बयान सुरु भएको छ । जिल्ला अदालत, मोरङको ६ नं. इजलासमा उनीहरुको बयान सुरु भएको मोरङ प्रहरीले
शंकाको घेरामा पार्टी एकता, ओली–प्रचण्डबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पार्टी एकताका विषयमा बिहिबार एक घन्टा लामो छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको
सार्वजनिक विदा कटौतीमा ठुलो बहसः प्रचण्ड असन्तुष्ट, गृहमन्त्री बादलको फरक मत, प्रम ओलीको ‘नो रेस्पोन्स’
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक बिदा कटौतिको विषयलाई लिएर प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । विदा पुनरावलोकनको पहल गरिदिन आग्रह गर्दै बिहीबार
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौंको बबरमहलबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रभातफेरी आयोजना गरेको छ । प्रभातफेरी पछिको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द
यी हुन सुन तस्करसँग मोटो रकम लिने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लामो समयदेखि सुन तस्करी गर्दै आएको समूहले २ करोड २० लाख ७७ हजार रुपैयाँ प्रहरीलाई वितरण गरेको खुलेको छ। एसएसपी श्याम खत्रीले तस्करहरुसँग एकैपटक १
शिक्षक बनाइदिने भन्दै दुई लाख सत्तरी हजार घुस खाने स्रोत व्यक्तिलाई प्रहरी संरक्षण
धनवीर दाहाल, रुकुम । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं १२ जनआस्था आधारभुत बिद्यालय पुरानापानीमा निजि दरबन्दीमा अध्यापन गराइरहेका सोही ठाँउका गोपाल प्रसाद देवकोटा रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिका आधारभुत बिद्यालय
कानून विपरीत अपार्टमेन्ट, अध्यक्ष नहुँदा समस्या समाधानमा अवरोध
काठमाडौँ । संयुक्त आवासमा देखिएका विवादको समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षको पदपूर्ति हुन नसक्दा काम रोकिएको छ । संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) का नाममा धेरै किसिमका समस्या एवं विवाद आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले
आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस: प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन पाँच वर्षयताकै उच्च
काठमाडौँ । यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च देखिएको छ । मुलुकभर फ्रिडम फोरमले एक वर्ष (मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८) सम्म गरेको मिडिया अनुगमनपछि
साढे ३३ किलो सुन प्रकरण, ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
सरोज यादव, विराटनगर केही महिनादेखि देशमै चर्चामा रहेको सुन प्रकरणमा ७ जना प्रहरी अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालतको कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको छ। मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’
टीका बन्धन, काठमाडौं आकाशेपानीका भरमा गरिने रोपाइँ र अन्य खेतीपातीका लागि आगामी मनसुन फलदायी बन्ने भएको छ। यस वर्षको मनसुनमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। दक्षिण एसियाली जलवायु
प्रशान्त वली, काठमाडौं देशका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ३२ हजार करार कर्मचारीको अवस्था अहिले न घरको न घाटको जस्तो भएको छ। उनीहरूलाई स्थायी गर्न सकिने नसकिने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै
कर्मचारी अदालत जाने !
सुनील महर्जन, काठमाडौं सरकारले स्वैच्छिक अवकाशबारे ठोस निर्णय नगरेको भन्दै स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका हजारौं कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्। अन्योलले गर्दा सरकारले ल्याएको घरपायक स्थानीय तहमा जान निवेदन दिन
प्याब्सन र एनप्याब्सनमा ताला
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले बुधबार प्याब्सन र एनप्याब्सनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले आज बिहीबार शिक्षा विभाग र शिक्षा समन्वय इकाइको कार्यालयमा
फेरी बढायाे अाेली सरकारले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको भाउ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको भाउ बढाएको छ । बुधबार मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा ३/३ रुपैयाँ मूल्य
उपमेयर नै श्रीमानको कुटपिटबाट घाइते
ललितपुर । अरुलाई न्याय दिलाउने न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपमेयर नै श्रीमानको कुटपिटबाट घाइते भएकी छन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक मुना अधिकारी श्रीमान धुव्र कुँवरको
युवालाई उद्यमी बनाउँदै राष्ट्रिय युवा परिषद्
काठमाडौँ । राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालले गाउँ÷गाउँका युवालाई उद्यमी बनाउन सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै आएको छ । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले छुट्याएको रु ३२ करोड
जलयात्रा लागि स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्दै कालीगण्डकी
पोखरा । देवता (शालिग्राम) कुँद्ने नदीका रुपमा परिचित हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मानिदै आएको कालीगण्डकी जलयात्राका लागि स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । विगत केही वर्षयता कालीगण्डकीमा
साढे ३३ किलो सुन तस्करी : ७ प्रहरी उच्च अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न ६३ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत, मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको छ । छानविनका लागि हिरासतमा रहेका २८ र अन्य ३५ फरार अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता